တရုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | အရှေ့တိုင်း
Medical Forehead အနီအောက်ရောင်ခြည်ဒီဂျစ်တယ်သာမိုမီတာ
Oriented 812B CE ISO နှင့် FDA နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော nebulizer
တစ်ခါသုံးတစ်ခါသုံး hydrocolloid ostomy အိတ်
LCD display ဒီဂျစ်တယ်လက်တွေ့သာမိုမီတာ
Oriented Soft-Touch ဘေးကင်းလုံခြုံရေး Lancet
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမာကျူရီ - အခမဲ့သာမိုမီတာ
ORIENTMED ORT30C Stethoscope
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ် PE PE breathable ပွင့်လင်းတိပ်
80A FINGERTIP Pulse OXIMETER
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်ပစ္စည်းသည်မျက်မှန်ကိုပိုမိုလုံခြုံစေခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ပေါက်နှင့်အတူလုံခြုံရေး goggle ။ Anti-Fog Anti-dust, Anti-virus ။ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ - အကာအကွယ်အဖုံးသည်မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိခြင်း၊ ပွတ်တိုက်လွယ်ခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေခြင်း၊ မှန်ဘီလူးမျက်နှာပြင်ချောခြင်း၊ ခြစ်ရာများမရှိခြင်း၊ အညစ်အကြေးမရှိခြင်း၊
ထုတ်ကုန်အမည် Sheild မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးခါးပတ်ကိုရင်ဆိုင်
ပစ္စည်း PVC, ဆေးဘက်ဝင်အဆင့် polyvinyl chloride
မှန်ဘီလူးပစ္စည်း မြူဆန့် & UV400 polycarbonate ဗဓေလသစ်
elastic Band ပစ္စည်း 100% ဝါဂွမ်း
အသုံးပြုမှု မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်း (တစ်ခါသုံး)
အရည်အသွေးစံ အမေရိကန်စံ: ANSI / ISEA Z87.1-2020ဥရောပစံ: EN166: 2001
ပိတ်ဆို့ပေါက်နှင့်အတူ 2. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး
(၃) Anti-Fog Anti-dust၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး
4. ပုံပန်းသဏ္structureာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - အကာအကွယ်အဖုံးသည်မျက်နှာပြင်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိခြင်း၊ ပွတ်တိုက်လွယ်ခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေခြင်း၊ ချောမွေ့သောမှန်ဘီလူးမျက်နှာပြင်၊ ခြစ်ရာများမရှိခြင်း၊
၅။ ဆန့်ကျင်ကျဆင်းမှု - စကရင်သည် ၁ မီတာအမြင့်မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျဆင်းသွားသည်၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများပြိုလဲခြင်းမရှိ၊ မျက်ခုံး၏အသွင်အပြင်သည်မပြိုကွဲနိုင်၊
6. အပူခုခံနိုင်မှု - မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးကို ၆၇ ထားပါ℃±2℃ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ 3min ရေ၌
7. Adjustments elastic band
နိယာမ ၏ မျက်လုံးကာကွယ်ခြင်း မျက်မှန်:
Safety goggles သည်အထူးသဖြင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်၊ ဓာတု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မတူညီသောလှိုင်းအလျားတို့၏အလင်းပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောမျက်မှန်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အကာအကွယ်ပေးသည့်မျက်မှန်များစွာ၊ ဘုံတိကျသောဖုန်မှုန့်မျက်မှန်များ၊ ထုထည်မျက်မှန်များ၊ ဓာတုဗေဒမျက်မှန်များနှင့်ဓါတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ခြင်းမျက်မှန်များရှိသည်။
CE က ISO FDA
က။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းရှိပါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်မှန်ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် ၁-၂ ရက်အတွင်း၊
ခ။ ထုတ်လုပ်မှုအသစ်ဖြစ်ပါကရက် ၃၀ မှ ၄၅ ရက်အထိပေးပို့ပါလိမ့်မည်။
ဖြေ။ ။ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုက်ဆံပေးရမယ်။
ဖြေ - ဟုတ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်လက်လီရောင်း ၀ ယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ကိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်သင်နှင့်အတူပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
A: ထုပ်ပိုးခြင်းမပြုမီ 100% Self- စစ်ဆေးခြင်း။
A: သေချာတာပေါ့၊ ခင်ဗျားရဲ့လည်ပတ်မှုကိုဘယ်အချိန်မဆိုကြိုဆိုပါတယ်။
Q5: စျေးနှုန်းကကော။ ဒီဟာကိုစျေးသက်သာအောင်လုပ်လို့ရမလား?
A: သုံးစွဲသူ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့ ဦး စားပေးအဖြစ်အမြဲတမ်းယူသည်။ စျေးနှုန်းသည်မတူညီသောအခြေအနေများအောက်တွင်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအပြိုင်အဆိုင်ဆုံးစျေးနှုန်းရရန်သင်အာမခံသည်။
ရှေ့သို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနိုက်ထရစ် / PVC လက်အိတ်
နောက်တစ်ခု: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတစ်ခါသုံးလူအုပ်စု ဦး ထုပ်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတစ်ခါသုံး PE အထီးကျန်ဂါဝန်
ORIENTMED ဖောက်ထွင်းမြင်သာသော PET သည်မြူဆန့်သောမျက်နှာကိုလှန်လိုက်သည်။
ORIENTMED ၅ လွှာအလွှာရှိသော KN95 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်သည် ...
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတစ်ခါသုံးလူအုပ်စု ဦး ထုပ်
HEBEI Oriental Import & Export CO ။ , LTD
ဖုန်းနံပါတ်: 0086 13315125256
၁။ တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များ၏မူလအစ ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတစ်ခါသုံးလက်အိတ်တစ်စုံသည် Dr. William Stewart Halstead ၏ဆေးခန်းတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုတွင်တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များသည်ဆရာဝန်၏လက်ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သေချာစေရုံသာမကဆေးဘက်ဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်သန့်ရှင်းမှု၏ကျန်းမာရေးကိုလည်းများစွာမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဤအုပ်စုရှိခွဲစိတ်ဆရာ ၀ န်ရှိတစ်ခါသုံးလက်အိတ်များသည်လူကြိုက်များသည်။ ရေရှည်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်တစ်ခါသုံးလက်အိတ်များတွင်fရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အသွေး lancet သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
Press Blood lancets ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ ယခုအခါလူများစွာသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်အဝပေးရန်ကျန်းမာရေးစင်တာသို့သွားပြီးနေ့ရက်များစွာပိုများလာသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်သွေး lancet ၏လိုအပ်ချက်သည်ယခင်ကထက်3ကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ Lancet ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာအရမ်းအရေးကြီးလာတယ်။ သွေးကြောကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာပိုပိုပြီးအရေးကြီးလာတယ်။ သွေးကြောတစ်လျှောက်သွေးပေါင်ချိန်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာကြပါစို့။ Press Blood Lancet ကိုအသုံးပြုနည်းအဆင့် ၁ ကာကွယ်မှုကိုထုတ်ယူပါ။